Review máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA có tốt không? | Muasalebang - Muasalebang
Review máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA có tốt không? | Muasalebang
Đang Đọc: Review máy ép chậm Panasonic PAVH-MJ-L500SRA có tốt không? | Muasalebang in Muasalebang
I-Panasonic Slow Juicer Lena enye yama-juicer aziwa kakhulu eVietnam namuhla. Kuyiphi imodeli I-PAVH-MJ-L500SAR iyimodeli abesifazane abaningi abayethemba kakhulu.
Ngakho-ke ingabe lo mkhiqizo muhle noma cha futhi ungathenga kuphi okwangempela? Ake sithole lonke ulwazi mayelana nale juicer enejubane elincane evela kuPanasonic esihlokweni esingezansi!
1 Ngenisa uphawu I-Panasonic slow juicer
2 Buyekeza Ingabe i-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA i-juicer ehamba kancane ilungile?
2.1 Idizayini kanye nesakhiwo somshini
2.1.1 1. Imodeli kanye nemodeli yomshini
2.1.2 2. Isakhiwo sePanasonic slow juicer
2.2 ADV kanye ne-disadv iphuzu yomkhiqizo
2.2.1 1. Izinzuzo
2.2.2 2. Ububi
2.3 I isici yesimanje
2.3.1 kuqala. Ukusebenza okunamandla
2.3.2 2. Ingakwazi ukugaya izithelo eziqandisiwe
2.3.3 3. Ingacindezelwa Ukuhlukahluka ijusi yezithelo ngaphezulu
2.3.4 4. Elula sebenzisaukusebenza kahle
2.3.5 5. Inhlanzeko evumayoakudingi umzamo omkhulu
3 Kufanele uthenge Ikuphi i-Panasonic slow juicer?
4 Imiyalo yokuthi isetshenziswa kanjani umshini I-Panasonic slow speed juicer
4.1 1 indlela faka i-juicer ehamba kancane i-Panasonic MJ-L500SRA
4.2 2. Iziyalezo isiphuzo sezithelo nge I-Panasonic MJ-L500SRA i-juicer ehamba kancane
5 Eyodwa Amanothi mayelana ne-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA ijusi engasheshi
Ngenisa uphawu I-Panasonic slow juicer
Kulungile wazalwa kusukela ngo-1918 eJapane nge imibandela Zama njalo ukulethela amakhasimende imikhiqizo ehamba phambili ngamanani aphusile. I-Panasonic namuhla yaziwa ngemikhiqizo eminingi edumile njengeziqandisi, amahhavini ama-microwave, ama-air-conditioner, ama-blenders, njll.
Sethula uhlobo lwePanasonic slow juicer
Ngaphezu kwe Iminyaka eyi-100 thuthukisa, uphawu I-Panasonic ifakazele isikhundla sayo ku- imakethe izinto zikagesi zasendlini ezinezimpumelelo eziningi ezivelele njengalezi:
Isilinganiso 65/100 i uphawu lokuhweba kuhle Okuhamba phambili Emhlabeni (2005).
Isilinganiso 6/30 i uphawu kuhle Okuhamba phambili e-Japan (2015).
Isilinganiso 5/50 uphawu enobungane nge Okuvuliwe Kakhulu Kwezemvelo Umhlaba jikelele (ngonyaka wezi-2014).
Ikakhulukazi emakethe yaseVietnam, iPanasonic isiqalile ukuthuthuka kusukela ngeminyaka yawo-1950s futhi iyinhlangano yokuqala eyi-100% ephethwe ngabangaphandle esebenza njengenkampani ephethe eVietnam. Amadivayisi avela ku-Panasonic adume ngekhwalithi yawo, ukuqina kwawo kanye nomklamo owubukhazikhazi futhi omuhle.
Buyekeza Ingabe i-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA i-juicer ehamba kancane ilungile?
Ukuze sihlole ukuthi ingabe i-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA i-juicer ehamba kancane iyinhle yini, ake sibheke imininingwane yomklamo, isakhiwo, kanye nobuhle, ububi nezici zesimanje zomkhiqizo. lokhu njengamanje!
Xem Thêm Máy hàn tự động là gì? Các loại máy hàn tự động hiện nay | Muasalebang
Idizayini kanye nesakhiwo somshini
1. Imodeli kanye nemodeli yomshini
I-Panasonic MJ-L500SAR ijuicer kancane kuqala umkhiqizo okuphethwe ukubukeka namuhla zikanokushoisithelo esikhama kancane sebenzela Ijusi inambitheka kangcono azizona uhlukanise izakhamzimba namavithamini ezintweni ezingavuthiwe.
Amamodeli namamodeli we-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA yokunyathelisa
Akugcini lapho, I-Panasonic MJ-L500SAR yebo Umbala uyinhlanganisela enhle yokumnyama nokumhlophe, egqamisayo futhi efanelekile ezindaweni eziningi zasekhishini lomndeni.
I-Panasonic MJ-L500SAR futhi inomklamo oqondile futhi ohlangene, awuthathi isikhala esiningi. Ngakho-ke, kuzoba lula kakhulu ezikhaleni ezincane, futhi kudinga ukuhambisa kakhulu.
2. Isakhiwo sePanasonic slow juicer
I-Panasonic MJ-L500 yakhiwe ngezinto ze-premium. Ikakhulukazi, icala nomzimba zenziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi, engagqwali futhi ihlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, umshini futhi ifakwe izesekeli eziningi ewusizo ezifana:
Ishubhu elide lokuphakela izithelo lingafaka izithako kalula, lisindise isikhathi.
Ipayipi lejusi linesembozo esiqinisekisa ukuhlanzeka, ukuvimbela ijusi ukuthi ingawi ngephutha ngemva kwe-juicing.
Ukuthatha amanzi, isihlukanisi, kanye nokushintshwa komshini nakho kwenziwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu, ezihambisana nemvelo.
ADV kanye ne-disadv iphuzu yomkhiqizo
Nazi ezinye izinzuzo ezivelele kanye nebubi bomkhiqizo ohlanganiswe kusukela ekubuyekezweni kwamakhasimende amaningi asebenzise i-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA ijuicer ehamba kancane.
Umzimba wotshani Khama zonke izinhlobo zezinto Kusukela ezithelo kuya emifino, ubhontshisi,…
Ikhono elihle lokukhama amanziinani lejusi liningi impela.
Kulula ukuqaqa nokuhlanza izingxenye zomshini, yebo Isivalo esihlukile sivimbela ukuchitheka kwejusi.
Iwaranti yangempela yinde impela fika Izinyanga ezingu-12.
Izesekeli zangempela yomshini ithandwa kakhulu, kulula ukuthenga futhi esikhundleni.
Inani kuhle uma kuqhathaniswa nama-juicer amaningi wezinye izinhlobo.
Yiba ikhono lokwenza u-ayisikhilimu (ngokuhlanza izithelo eziqandisiwe).
I-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA inezinzuzo eziningi ezivelele
Ishubhu elilandelayo impahla Ayinkulu kakhulu, enezithelo ezinkulu ezidinga ukunqunywa zibe izingcezu ezincane ukuze zicindezelwe.
Imifino ene-fiber eningi nayo idinga ukuqotshwa ukuze ingasivali isihlungi.
Awukwazi ukukhama wonke amanzi kaphayinaphu noma uphayinaphu.
Ikhipha umsindo owengeziwe uma iqhathaniswa Hurom slow juicer noma Kvings.
I isici yesimanje
I-Panasonic MJ-L500SAR i-juicer ehamba kancane iyisisetshenziswa sesimanje esitshalwe yi-Panasonic futhi ifakwe ubuchwepheshe obuningi obuhle, ikunikeza ukwesekwa okuphezulu ukwenza ijusi ngendlela elula.
Ngaphezu kwalokho, ijusi ecindezelwe ku-Panasonic MJ-L500SAR ingamanzi ahlanzekile, agcina wonke amavithamini nezakhi ezitholakala esithelweni, kuhle kakhulu empilweni uma esetshenziswa.
Xem Thêm [Giá Mới 2022] Máy Cắt Bê Tông Giá Rẻ bán chạy... | Muasalebang
kuqala. Ukusebenza okunamandla
I-Panasonic MJ-L500SAR juicer ifakwe injini engu-150W eyenza kube lula kuwe ukukhama zonke izinhlobo zemifino, izilimo eziyizigaxa nezithelo kalula kuyilapho ulondoloza amandla amancane.
Akukhona lokho kuphela, ngomthamo ophezulu kangaka wokusebenza, ungakwazi ukuqedela iphathi yejusi yamalungu omndeni ngesikhathi esifushane ngaphandle kokuphinda izikhathi eziningi.
I-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA ifakwe amandla okusebenza anamandla
2. Ingakwazi ukugaya izithelo eziqandisiwe
I-Panasonic MJ-L500SAR chậm Slow Juicer Ngomthamo oqinile, iyakwazi ukucwenga kahle izithako zezithelo eziqandisiwe. Awudingi ngokuphelele ukucwilisa noma ukucwilisa isithelo emanzini ngaphambi kokwenza ijusi.
Kuya sebenzela thola izinto lokhoudinga nje ukwenza lezi zinyathelo ezi-3 eziyisisekelo:
Susa izithelo eziqandisiwe esiqandisini.
Faka isithelo esiqandisiwe ku-juicer ehamba kancane ngeshubhu yokuphakelayo.
Vula iswishi ukuze umshini uqale ukujuxuza.
Linda impumelelo futhi ujabulele inkomishi emnandi yejusi yezithelo ndawonye Abangane bomndeni.
3. Ingacindezelwa Ukuhlukahluka ijusi yezithelo ngaphezulu
Ngokungafani nezixube zezithelo ezijwayelekile, i-Panasonic PAVH-MJ-L500SAR juicer slow can juice izithelo nemifino ehlukene.
Akukhona lokho kuphela, nge-MJ-L500SAR ungakwazi futhi namantongomane ejusi afana nobhontshisi wesoya, ubhontshisi obomvu ukuze ubeke esikhundleni. umshini wokwenza ubisi lwamantongomane Noma mhlawumbe wenze u-ayisikhilimu.
4. Elula sebenzisaukusebenza kahle
Ukusebenza kwejusi ngale Panasonic slow juicer kulula kakhulu. Umshini unenkinobho eyodwa kuphela yokushintsha amandla. Akuthathi isikhathi eside ukujwayela umshini.
Ngokungafani namanye ama-juicer amaningi ahamba kancane, i-Panasonic MJ-L500SAR inamandla okusebenza angu-150W ukuyisiza ukuthi isebenze kahle futhi ngaphandle kokubanga umsindo omningi. I-blender Ngokuvamile, ungaphazamisi imisebenzi yabanye abantu.
5. Inhlanzeko evumayoakudingi umzamo omkhulu
Izingxenye ze-Panasonic slow-speed juicer zingahlakazwa kalula
Umshini wezithelo I-Panasonic MJ-L500SAR Yakhelwe ngezingxenye ezihlukene ezingahlakazwa kalula.
Ngenxa yalokho, ukuhlanza umshini nakho kuba lula, lapho ungakwazi ukuhlukanisa ngokuphelele izingxenye zomshini ngesandla ukuze uhlanzwe bese uhlanganisa kalula.
Ngaphezu kwalokho, umshini futhi unomsebenzi wokuvala amandla othomathikhi lapho ukulayisha ngokweqile kwenzeka, okusiza ukuqinisekisa ukuphepha komsebenzisi, ukugwema izigameko zomlilo nokuqhuma, futhi nokusiza ukwandisa impilo yemoto.
Kufanele uthenge Ikuphi i-Panasonic slow juicer?
Njengamanje, emakethe yaseVietnam, imikhiqizo ye-Panasonic ithengiswa ezikhungweni eziningi zikagesi ezinkulu njengeNguyen Kim, Dien May Xanh, Dien May Cho Lon, njll.
Kunconywa ukuthi uthenge i-juicer ehamba kancane ku-inthanethi ezitolo zangempela zePanasonic ku-Tiki, Lazada, Shopee
Kodwa-ke, njengoba isimo sobhubhane sicindezela kakhulu, kufanele ukhethe isitolo se-inthanethi ongasithenga.
Ngakho-ke, kulesi sihloko, ngikwethule izitolo zangempela zePanasonic. Phakathi kwazo, unga-oda kumasayithi we-e-commerce alandelayo:
Imiyalo yokuthi isetshenziswa kanjani umshini I-Panasonic slow speed juicer
1 indlela faka i-juicer ehamba kancane i-Panasonic MJ-L500SRA
Lapho uqala ukuthenga i-Panasonic slow juicer, udinga ukuhlanza izingxenye zomshini ngamanzi ahlanzekile, usule, bese uzifaka emzimbeni ngokwamazwe alandelayo:
Ungayifaka kanjani i-Panasonic slow juicer MJ-L500SRA
Isinyathelo 1: Faka ijusi kanye namapayipi ejusi angu-2, uholele i-pulp emshinini kuqala. Kumele kuqashelwe ukuthi indlela efanele yengxenye yomcibisholo odakeni kufanele ihambisane nengxenye yomcibisholo emzimbeni womshini.
Isinyathelo sesi-2: Iyalingana ingxenye umshanelo Zungezisa irabha yomshini ngaphakathi kodaka.
Isinyathelo sesi-3: Faka iyunithi ye-micro mesh emshinini, futhi unake ukufaka umcibisholo endaweni efanele.
Isinyathelo sesi-4: Faka isikulufu emshinini.
Isinyathelo sesi-5: Faka ishubhu lokuphakelayo, naka ingxenye yomcibisholo ongakwesokudla ehambisana nomzimba, bese uzungezisa ishubhu ngokwewashi ukuze uvikele ishubhu odakeni.
Ngakho-ke usuqedile ukufaka izingxenye zomshini ndawonye, ​​​​manje qala ukwenza ijusi ngokulandela imiyalelo engezansi.
2. Iziyalezo isiphuzo sezithelo nge I-Panasonic MJ-L500SRA i-juicer ehamba kancane
Ukusebenza kokukhama ijusi ku-Panasonic MJ-500SRA juicer slow kulula, udinga nje ukulandela lezi zinyathelo:
Uma kungokokuqala ngqa ukusebenzisaudinga ukuhlanza izingxenye zihlanzekile ngamanzi ahlanzekile bese ukhipha.
Qinisekisa ukuthi izingxenye zomshini zinamathiselwe ngokuvikelekile emzimbeni njengoba kuyalelwe ngenhla.
Sika isithelo sibe yizicucu ezincane ukuze zilingane neshubhu lokuphakela lomshini.
Xhuma amandla emshinini, vula iswishi ukuze uqale umshini bese ufaka izithako ezisikwe epayipini lokuphakelayo ukuze ucindezele.
Qaphela: Vele uvumele umshini usebenze ukuqhubeka cishe imizuzu eyi-15, ngemuva Lapho Yiyeke iphumule imizuzu engu-30 bese uyisebenzisa futhi ukugwema ukushisa ngokweqile.
Imiyalo yokukhama isithelo nge-juicer ehamba kancane i-Panasonic MJ-L500SRA
Eyodwa Amanothi mayelana ne-Panasonic PAVH-MJ-L500SRA ijusi engasheshi
Nawa amanye amanothi okudingeka ukwazi uma usebenzisa i-Panasonic MJ-L500SRA juicer slow ukwenza ijusi ibe mnandi kakhulu, kanye nokusiza ukukhulisa impilo yomshini:
Isidingo ukuhlanza umshini I-Panasonic slow juicer ngemva kokusetshenziswa, ngoba izinsalela ze-fibrous ezivela ezintweni ezingavuthiwe zizonamathela emshinini futhi zibe nzima kakhulu ukuzihlanza ngokuhamba kwesikhathi.
Ungasebenzisi utshwala noma izihlanzi ezinamandla ukuhlanza umshini. Zizolimaza izingxenye zomshini futhi zibangele kalula ukusabela kwamakhemikhali okungekuhle empilweni.
Ungavumeli amanzi angene emzimbeni wedivayisi lapho uhlanza.
Ukuhlanza ngokuphelele izingxenye zomshini futhi uzivumele zome ngokuphelele ngaphambi kokuzifaka emzimbeni.
Wena Qaphela lapho uhlanza isici sokuhlunga umshini ngoba zibukhali impela.
I-Panasonic Slow Juicer I-MJ-500SRA Ingenye yama-juicer aziwa kakhulu namuhla.
Ngethemba ngolwazi engiluletha esihlokweni, uzoqonda okwengeziwe ngalo mshini futhi ukhethe eyodwa yomndeni wakho. i-juicer ehamba kancane ukulingana okuhle kakhulu.
Uma unemibuzo noma iziphakamiso ngalesi sihloko, sicela ushiye amazwana ngezansi kwesihloko futhi ngizokuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Hướng dẫn cách lựa chọn số điện thoại phù hợp năm sinh của bạn | Muasalebang